जे भए पनि आदर्श महिलाले अरूलाई लाग्दैन, आफैमा उसले दोषहरूको गुच्छा, प्रायः व्यावहारिक पाउँदछ। महिलाहरु को लागि सबै भन्दा साधारण समस्या सेलुलाइट हो । यस्तो अप्रिय दोष एक कम गतिविधि जीवन शैली, कुपोषण वा वंशानुगत भविष्यवाणी को एक लगातार परिणाम हो। निस्सन्देह, फिटनेस र एक विशेष आहारले छाला सुधार गर्न मद्दत गर्नेछ। तथापि, शरीरको लागि वैक्यूम मसाजद्वारा एउटा ठोस योगदान गरिनेछ।
एक वैक्यूम मसाज कसरी काम गर्दछ?
तपाईलाई थाहा छ, सेल्युलाइटले रक्त आपूर्तिको बिशेषताको साथ साथै लिम्फको बहिष्कारमा उल्लङ्घन देखा पर्दछ। यो कस्मेटिक प्रभाव tubercles र सानो edema को उपस्थिति मा व्यक्त गरिन्छ, त्यो तरल पदार्थ ठहराव हो। यो उत्थान हो कि सेल्युलाईट देखि वैक्युम मास रिलीव गर्दछ। वास्तवमा, यन्त्र सरल पंपको रूपमा सञ्चालन गर्दछ, जसको सिद्धान्त पानीको प्राकृतिक इन्जेक्शनमाथि दबाबमार्फत आधारित हुन्छ।
यसको अतिरिक्त, वैक्यूम डिभर्जन द्वारा अभिनय गरे, उपकरण मालिश छाला क्षेत्र, जुन ऊव्र रक्तचाप संग एक साथ ऊतकों को प्रवेश गर्न ओक्सीजन र पोषक तत्वहरु को कारण बनता छ। जब दुवै विषाक्त पदार्थ र तरल सफलतापूर्वक हटाइयो।
वैसे, मालिश केवल छाला को एक तह सम्म पुग्छ, तर मांसपेशियों र उपचर्या वसा पनि। नतिजाको रूपमा, छाला चिसो हुन्छ, र घृणात्मक "नारंगी छील" बिस्तारै ग्राउन्ड खोलिएको छ।
निस्सन्देह, यस्तो प्रभावकारी प्रक्रिया ब्यूटी सैलूनमा गर्न सकिन्छ। तर तिनीहरू निस्सन्देह, "धेरै पैसा उड्न।" यसबाहेक, "नरम" स्थानमा अप्रिय दोषको विरुद्धमा लडाइँको सफलताको लागि कम्तीमा केहि पाठ्यक्रमहरू आवश्यक पर्नेछ।
एक वैक्युम मसाज कसरी प्रयोग गर्ने?
यस आवश्यक सहायकको प्रयोगमा, महिला कुनै जटिल छैन, तपाइँलाई मात्र प्रयोग गर्न र केही नियमहरू पछ्याउन आवश्यक छ:
प्रक्रिया अघि, स्नानको एक विपरीत लिनुहोस्, छालाको साथ स्क्रिनको उपचार गर्नुहोस्, र त्यसपछि विरोधी सेलुलाइट क्रीम लागू गर्नुहोस्।
उपकरण छालामा राखिएको छ र प्रत्येक साइटमा5मिनेट सम्म काम गर्ने अवस्थामा राखिएको छ, र अधिक। यस समयमा तपाईले सक्शन लगाउनुहुनेछ।
शरीरमा पनि, माछाको नलीले रगतको रगतले रक्तचापको रेखामा सजिलै संग चल्छ।
सिमेन्टमा तेलको तेललाई सीधा प्रयोग गर्नु अघि।
ग्लुटलल क्षेत्रको अलावा, विरोधी-सेल्युलाइट प्रभावको साथ एक वैक्यूम मलहरू खुट्टा, हात, कूल्खा, क्यान्सर, ब्याक र पेटमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। स्तन, सम्भवतः यी चमत्कारपूर्ण प्रक्रियाहरू मात्र लिन सकिने एकमात्र स्थान हो। वैसे, बिक्री मा यो संभव छ अनुहार को लागि वैक्युम मसाज को खोज - छाला लोचदार को लागि कम शक्तिशाली उपकरण।
याद गर्नुहोस् कि एक वैक्यूम मासिस प्रयोग गर्न को लागी निवारणहरू छन्:
छालामा घाव, पिमलेस र खरोंचको उपस्थिति;
गुर्दे र जिगर रोगहरू;
वैक्युम मसाज कसरी छनौट गर्ने?
आज, बजार मोडेल देखि भरी छ। सुविधाको लागि, हामी नलिका संग एक वैक्युम मास चयन गर्न सिफारिस गर्दछौं। यसले शरीरको विभिन्न भागहरूको लागि उपयुक्त नलिका प्रयोग गर्न अप्ठ्यारो संवेदनशीलतालाई कम गर्नेछ।
यन्त्र ब्याटरबाट काम गर्न सक्छ। यो एक संकुचित संस्करण हो ह्यान्डल को रूप मा जुन मशरूम कैप को आकार मा नजल संलग्न छ। यो यात्रामा तपाईं संग भण्डारण वा लिनुको लागी सुविधाजनक छ। केहि मामिलाहरूले सञ्जालबाट काम गर्छन् र एक नियन्त्रण तत्वसँग सम्बन्धित हुन्छन्, जसबाट देखिने धेरै वैक्यूम नलिकाहरूले तारहरूमा छोड्छन्।
वैसे, सामूहिक "केहि टोपी" मा सेल्युलाइट प्रभाव को बढाने को लागि spikes संग एक रोलर छ।
सरल र सस्तो विकल्प एक मेकेनिकल मोडेल हो जुन निर्वात मालिश जार र एक पम्प संग हुन्छ। यो ठीक नै एउटै "डिब्बाबंद" प्रक्रिया हो जुन हाम्रो दादीले प्रयोग गर्न धेरै मन परायो।
खेलहरूको लागि वायरलेस हेडफोन
नपकिन्सका लागि डिस्पेससर
कंक्रीट फूल बर्तन
परिसर को विसर्जन को लागि क्वार्ट्ज लैंप
ट्याब्लेटका लागि कन्टेनर
छतको लागि प्लम
इलेक्ट्रिक स्टोव ग्लास-सिरेमिक्स
फ्रिजका लागि थर्मोस्टेट
माइक्रोवेव ओवनको लागि कुकवेयर - गिलास
थर्मोस संग कम्पन
फ्लोर एयर कंडीशनर घरको लागि - गर्मी कसरी गर्मीबाट बचाउन सकिन्छ?
धुलाई सुखाने मिसिन
शरीरको भाषा - यसको अर्थ के हो, कसरी शरीरको भाषाले हामीलाई बताउँछ बुझ्न सकिन्छ?
क्रिस्टिना Orbakaite द्वारा ड्रेस
तीव्र पेट दुख्ने
सिरेमिक टाइलहरू कसरी काट्ने?
गाजर, जडी बूटी र लसुन संग एबेरबर्ग
Lappeenranta - आकर्षण
आधा-नग्न मनुष्यहरूले पोपको बारेमा चलचित्रको प्रीमियरमा सार्वजनिक रूपमा शङ्का गरे
सांगाई राष्ट्रिय पार्क
मिर्च रोपण गर्न अनुकूल दिनहरू - के यो रोप्ने र डुबाउने बेलामा उत्तम हुन्छ?
सुन्तला संग गाजर सलाद
बहुविध मा एक स्टव कसरी पकाउने?
उच्च पछाडि सोफे
बहुविधमा मकरेल कसरी बनाउने?
चकलेट ग्लास र कोकोआ र दूध - नुस्खाको बनाइएको छ
पैसाको लागि निजीोट
कस्तो पतला नतालिया आर्यरिचेनको?
राजकुमारीहरूको बारेमा डिज्नी कार्टून
"हैरी पोटर" को ताराले प्लेब्याकका लागि फोटोसेटमा एक निष्कपट शरीरलाई हल्काएको छ